'ကိန်းဘရစ်ကနေထွက်ခွာတာဟာအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့မခံစားရဘူး' ။ ၂၀၂၀ ဘွဲ့ရသူများ၏နောက်ဆုံးသက်တမ်း - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
'' ကန ဦး ကိန်းဂဏန်းထွက်ခွာအစစ်အမှန်မခံစားရဘူး '': သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသက်တမ်းအပေါ် 2020 ၏ဘွဲ့ရ
ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဘွဲ့ရမည့်ရက်သတ္တပတ်ကိုမှတ်သားဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ကင်းဘရစ်ကျောင်းသားများ၏နေ့စဉ်စီတန်းလှည့်လည်မှုများကိုသူတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူကင်းဘရစ်အလယ်ပိုင်းရှိဆီးနိတ်အိမ်ထဲသို့ပုံမှန်အားဖြင့်တွေ့မြင်နေရသည်။ ယခုနှစ်တွင်မူအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်။
အပြီးသတ်ထိုင်ခြင်း၊ မေလ၊ ရက်သတ္တပတ်နှင့်ဘွဲ့ရခြင်းများသည်သာမန်နှစ်တွင်ကင်းဘရစ်ကျောင်းသားများအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်လမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ၏နှစ်ဖြစ်သောဤအရာအားလုံးကိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
အိမ်တွင်ဖိုင်နယ်လ်ပွဲထိုင်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်းကိုသင်၏ကလေးဘဝအိပ်ခန်းတွင်ပြီးအောင်လုပ်ခြင်းသည်မည်သို့ဖြစ်သနည်း။ သင်ကသင်၏ကင်းဘရစ်အားလုံးမသိဘဲမပါဘဲ '' ကြာရှည် '' ပြုမိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဘာလဲ နှင့်အညီ, ဖြစ်ကောင်းအရေးအကြီးဆုံးကတော့, 'ပက်ဖြန်း' အစဉ်အလာရှင်သန်ခဲ့တာလဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်သမိုင်းတွင်ထူးခြားသည့်နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲများရရှိခဲ့ကြသော ၂၀၂၀ အလွှာနှင့်စကားပြောဆိုခဲ့သည်
မတ်လလယ်တွင်အလျင်အမြန်တိုးတက်နေသောသော့ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအခြေအနေသည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအပြီးသတ်သူများသည်အားလပ်ရက်အပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ကင်းဘရစ်သို့ပြန်သွားရန်၊ ညှိနှိုင်းထားသည့်သက်တမ်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်၊ ကင်းဘရစ်တွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်ရန်နေ့ရက်များအတွင်းကုန်ဆုံးသွားသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အားလုံး။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူမှနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားမက်ဒလင်းဆိုတီကသူသည်ကင်းဘရစ်သို့ပြန်လာမည်မဟုတ်ဟုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းတစ် ဦး က၎င်းသည်အဆုံးဖြစ်သည်ဟုမှတ်မိသော်လည်းကျွန်ုပ်မယုံခဲ့ပါ၊ ဘာမှမပြောသေးဘူး၊ ငါ့စက်ဘီးကိုမြေအောက်သိုလှောင်ရုံထဲမှာတောင်ထားခဲ့တယ်။
ဥပုသ်လကုန်ပိုင်းနောက်ပိုင်းထွက်ခွာမည့်နေ့ရက်ကိုရွေးချယ်သူသို့မဟုတ်အီစတာအားလပ်ရက်များ၌တက္ကသိုလ်တက်ရန်မူလကစီစဉ်ထားသူများ (နောက်ဆုံးဆန်ကာတင်သူများ၏အဆန်းမဟုတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်) သည်ကိန်းဘရစ်ခ်ျတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးပယ်စ်၏သက်တမ်းတိုတို၏ကံကြမ္မာအီးမေးလ်တွင် သူတို့ရဲ့စာပုံး။ အဲမန်နူဝဲလ်ကောလိပ်သမိုင်းပညာရှင်ဖင်နန်န်ရော်ဘင်ဆင်ကဲ့သို့သောသူတို့သည်သူတို့သည်ပိုမိုဆိုးရွားလာနေသောအခြေအနေကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ကိုအခက်ခဲဆုံးထိမိစေခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်မှုဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရက်သတ္တပတ်၏အစမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ငါးခုသို့မဟုတ်ခြောက်ပတ်အတွင်းပြန်သူတို့ကိုကိန်းဘရစ်၌သူတို့ကိုတွေ့မြင်ချင်ပါတယ်ကောင်းတစ် ဦး အခွင့်အလမ်းရှိရှိ၏စဉ်းစားအိမ်မှုကိစ္စစဉ်းစားချွတ်ချီလွှဲလိမ့်မယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ Toope ကနေများစွာသောအမှောင်အီးမေးလ်များပြီးနောက်, ငါတို့နေဆဲကျန်ရစ်သူများသည်ကျနော်တို့လာမယ့်သက်တမ်းအတွက်ပြန်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအပြည့်အဝသတိထားမိခဲ့ကြသည်နှင့်ထွက်ခွာတစ်ခုချင်းစီကိုနောက်ဆုံးထက်ပိုပြီးစိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာဖို့သလိုပဲ။
စိန့်ကက်သရင်းကောလိပ်မှာနှလုံးသားပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်မျက်နှာပြင်သည်ကျောင်းသားများကိုကျောင်းထွက်ပြီးကျောင်းဆင်းခြင်း။ ဒီလသင်တန်းဆင်းတဲ့သူအားလုံးကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ Credit❤️ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် - မာတင်ဘွန်း၊ ကင်းဘရစ်ဒိုင်ယာရီ
မျှဝေသည် The Tab Cambridge (@thecambridgetab) ဇွန် ၂၅ ရက်၊
withပြီလအစတွင်သင်နှင့်အတူနေထိုင်ရန် (သို့) ထပ်မံတွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်နေသည့်မိတ်ဆွေများကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းသည်manyပြီလအစောပိုင်းတွင်များစွာသောသူတို့အတွက်အခက်ခဲဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ သူတို့၏တစ်နှစ်တာအုပ်စုသည်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဘွဲ့ရပြီးနောက်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ကျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အခြားသမိုင်းပညာရှင်နောက်တစ် ဦး ဖြစ်သော Caitlin Cashmore-Roche ကသူမသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှမ်ပိန်သောက်သုံးပြီးပီဇာနှင့်ဥယျာဉ်၌ wildflower မျိုးစေ့များကိုကြဲခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့နှင့်အတူနေထိုင်စဉ်သူတို့နှင့်သူတို့ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရတော့မည်မဟုတ်သောကြောင့်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတွေထဲကတစ်ခုပါ ။
ပထဝီပညာရှင်ရော်ဘင် Topper က ၀ မ်းနည်းမှုသာမကဘဲအံ့အားသင့်စရာများကိုလည်းရှင်းပြသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်ခြင်း၏နိမ့်ကျသည့် အချိန်မှစ၍ လက်ခံမှုဆီသို့အခြေအနေ / လှုပ်ရှားမှုများကိုအစဉ်တစိုက်အသိအမှတ်ပြုမှုဖြင့်ပါ ၀ င်သည့်စာတမ်းများနှင့်သင်တန်းများ၏ထိတ်လန့်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းစာမေးပွဲများ၏ထူးဆန်းသည့်အဖြစ်မှန်။ ဒါဟာယခုသုံးလကျော်ခဲ့တာငါနေဆဲအရာအားလုံးကိုပြုပြင်တာပါ ။
Caitlin ကရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးမှု၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌နောက်ထပ်ရှစ်ပတ်အတူတူရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်း၎င်းသည်ကွဲသွားသည်။
Madeleine မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်များစွာအတွက်ပျောက်ဆုံးသောသက်တမ်းကိုစဉ်းစားရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူမသည် Tab ကိုပြောခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက quarantine တွင်ကျွန်တော်ငိုစရာမလိုဘဲပြီးခဲ့သည့်သက်တမ်းအတွင်းလွဲချော်သွားသောအရာကိုမစဉ်းစားနိုင်သော်လည်း၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပြီ။ လာမည့်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းကင်းဘရစ်သို့ပြန်လာရန်အကြောင်းပြချက်အချို့ရှိခြင်းသည်ယခုတွင်၎င်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိစေခဲ့သည်။
အိမ်တွင်အသုံးအနှုန်းသည်ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်သော်လည်းအချို့သောနည်းလမ်းများတွင်နောက်ဆုံးရွေးချယ်သူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစာမေးပွဲသက်တမ်းရှိသည်။ လူအများစုကမူပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ဖိစီးမှုနည်းစေသည်ဟုသဘောတူကြသည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်အချို့စာမေးပွဲများကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ်ကြာပြီလား၊ ၎င်းသည်နိဂုံးချုပ်အတွေ့အကြုံကိုကြီးမားစွာပြောင်းလဲစေပြီးအချို့အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ၀ န်ထုတ်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ Caitlin ကရှင်းပြသည် - ရိုးသားဖို့ဆိုရင် Cambridge အတွက်နောက်ဆုံးသက်တမ်းရှိတာထက်အများကြီးစိတ်ဖိစီးမှုနည်းတယ်လို့ငါထင်တယ်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောပိုက်ကွန်သည်သက်တောင့်သက်သာ ရှိ၍ လေ့လာစရာများအနည်းငယ်သာရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အချိန်ကိုယူပြီးစေ့စေ့စပ်စပ်လုပ်နိုင်သည်။
၂၄ နာရီအွန်လိုင်းစာမေးပွဲများသည်ဖင်လန်လူမျိုးများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အကြောင်းမှာ dyslexic သူတစ်ယောက်သည်စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်ရေးသည့်အခါဖြတ်သန်းသွားသောပုံမှန်အမှားများကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ များစွာသောအချက်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းသင်ကြားပို့ချမှုများသည်နောက်လာမည့်နှစ်အလိုက်တက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိစေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းစာမေးပွဲပုံစံရှိသည်။
Madeleine သည် ၂၄ နာရီစာမေးပွဲများအတွက်မကောင်းသောလက္ခဏာများကိုညွှန်ပြခဲ့သည်။ သူမကပြောကြားခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သူမဆိုအကြံပြုထားသည့် ၄ နာရီခန့်စာရွက်စာတမ်းများတွင်ကုန်ခဲ့ရသည်ဟုမထင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နာရီပြည့်သောမည်သူကိုမဆိုမသိသော်လည်းထိုကာလများအတွင်းအိပ်မောကျနေသူများစွာကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
အိမ်၌နေခြင်းသည်အချို့သောကင်းဘရစ်ဖိအားများကိုမကိုင်တွယ်ရန်လည်းဆိုလိုသည်။ ဖင်လန်နိုင်ငံမှထောက်ပြသည်မှာ - ကင်းဘရစ်ခ်ျမှအဝေးမှထွက်ခွာခြင်းမှာမေလနှင့်ဇွန်လအစောပိုင်းတုန်းကကောလိပ်အထက်တွင်ရှိနေသောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုလျော့နည်းစေခဲ့သည်။ တခြားသူတွေအဲဒီလိုလုပ်နေတာကိုမြင်ရလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေနွေးငွေ့အောက်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။
တည်ထောင်ထားသည့်အိမ် - အိမ်သည်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်များ၏လိုဏ်ဂူခန်းမများထက်ခြိမ်းခြောက်မှုနည်းပါးသည်ဟုခံစားရသည်။ သင်၏နာရီ - မိတ်ဖက်၏များပြားလှသောမှတ်စုယူခြင်းနှင့်သင်၏ Facebook စာဖတ်ခြင်းနာရီကိုနှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ ထို့အပြင်သင် (စားပွဲအောက်၌ပုန်း။ မထားဘဲ) သင်သည်ရေစာစားနိုင်သည်။
Emmanuel College စာကြည့်တိုက်တွင်စာအုပ်နှင့်အရင်းအမြစ်ပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ Aida Miralaei @_aidaphotos, @emmanuelcambridge ရှိတတိယနှစ် Computer Science PhD ကျောင်းသားများ၏ဓာတ်ပုံများ။ #cambridge #cambridgeuniversity #emmanuelcollege #cambridgecollege #librariesofinstagram #librarylife #library
မျှဝေသည် ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် (@cambridgeuniversity) PDT မှမေလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၅ တွင်၊
Caitlin သဘောတူသည်: ငါကိန်းဘရစ်မှာငါ့အချိန်ကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားခဲ့ရပါတယ်နှင့်ငါရိုးရိုးသားသားအများကြီးသာယာတဲ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒီဝေါဟာရကို။ သို့သော်သူမအလွန်ကံကောင်းသည်ကိုသူသိသည်ကအိမ်သည်အခြားသူများစွာနှင့်မတူဘဲငြိမ်းချမ်းစွာသန့်ရှင်းသောနေရာကိုပေးခဲ့သည်။ ငါကဒီအနေအထားတွင်ဖြစ်ဖို့, ထိုကဲ့သို့သောညင်သာပျော့ပျောင်းအိမ်မှာဘဝရှိသည်ဖို့ဒါကြောင့်အခွင့်ထူးခံတယ်အသိအမှတ်မပြု။
ဒါဟာဒါပမေဲ့အံ့သွ anticlimactic ပဲ!
ငါတို့ပြောခဲ့သည့်နောက်ဆုံးရွေးချယ်သူတစ်ယောက်မှသူတို့၏ဘွဲ့ကြိုအလုပ်၏နောက်ကွယ်ကိုကြည့်ခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ Caitlin သည်သူမစိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်ဟုပြောရန်အထိဝေးသွားခဲ့သည်။
အခမ်းအနားမရှိခြင်းနှင့်သူမ၏ဒီဂရီပြီးဆုံးခြင်းသည်အိမ်၌ထိုင်။ Madeleine သည်အတော်ပင်ပျော့ပျောင်းနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ငါပုံစံနှင့်ငါအိမ်မှာဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏နောက်ဆုံးစာမေးပွဲတွင်မှလမ်းလျှောက်ရအံ့သောငှါ, ငါမျှော်လင့်ထားကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမရကြဘူးဆိုလိုတာကခံစားရတယ် ငါကအရင်တုန်းကရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကိန်းဘရစ်ချ်ဟာငါ့အတွက်အရမ်းကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကပန်းတိုင်မျဉ်းကိုဖြတ်ကူးခြင်းရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျင်းပမယ့်အခမ်းအနားတွေမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရဖို့အရမ်းခက်ခဲခဲ့တယ်။
ထိုနည်းတူစွာဖင်နီးယန်းက Tab ကိုပြောကြားခဲ့သည်မှာ - သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီတိုထဲမှာထိုင်နေတဲ့လက်ပ်တော့ပ်တစ်လုံးနဲ့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ဆံပင်ညှပ်ထားတာကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တာကထူးဆန်းနေတယ်။ သူကသူ၏နောက်ဆုံးစာစီစာကုံးကိုတင်လိုက်သောအခါကျန်မိသားစုများသည်အိပ်ပျော်နေကြသည်၊ သို့သော်ဤလျင်မြန်စွာအဘို့အတက်လုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ကသူတို့ဥယျာဉ်တော်၌ငါ့ကိုပက်ဖြန်းသော်လည်းသူတို့အားလုံးတက်လာကြသည် (မိုးရွာသည်!)
တိကျမှန်ကန်မှုအတွက် 100 မှတ် (Credit: Finnian Robinson)
အိမ်မှာရှိနေပေမယ့်ကျောင်းသားတွေရဲ့အခမ်းအနားတွေကကင်းဘရစ်ဆက်သွယ်မှုခိုင်မာနေတုန်းပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်ခံရသူလေး ဦး အနက်သုံး ဦး သည်အိမ်၌ရှိနေသော်လည်းပက်ဖြန်းထုံးတမ်းစဉ်လာကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့ကြပြီးအများစုသည်ကင်းဘရစ်မှသူငယ်ချင်းများနှင့်ဖြစ်စေ၊
နံနက်ခင်းမှုတ်လိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖင်နန်သည်သူ၏ကင်းဘရစ်သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်ပေးရသည်။ ထိုနေ့လည်ခင်းတွင်အခြားမင်းသမီး Emma များကိုငါချဲ့ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးသုံးနှစ်အတူတကွအချိန်ကုန်ခံခဲ့ကြသည်။ ငါမိုင်အနည်းငယ်အကွာမှာနေတဲ့အခြားကောလိပ်တစ်ခုမှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခွင့်ရတယ်။ ပန်းခြံမှာသစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာခိုလှုံနေတဲ့ဖန်ခွက်တစ်ခုရှိတယ်။ Proscco နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ အိမ်မှာနေတုန်းကိန်းဘရစ်ချ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလို့အိမ်မှာငါအရမ်းကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်။ ။
တက္ကသိုလ်သူငယ်ချင်းများဖြစ်ဆက်လက်သူကျောင်းသူကျောင်းသားများလည်း Robyn ရဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ၏အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ကြသည်။ သူမကပြောကြားခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများအနက်မှဆဌမပုံစံနှင့်တက္ကသိုလ်တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်သူနှင့်အိမ်မှသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည်လူမှုရေးအရဝေးကွာသောရေမှုန်ရေမွှားနှင့် BBQ ကြောင့်ကျွန်ုပ်အားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ သူတို့ကိုလူချင်းတွေ့ခွင့်ရခြင်းသည်ချစ်စရာကောင်းသည် - ကျွန်ုပ်တို့ FaceTime နှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ကြသော်လည်းသူတို့၏တည်ရှိမှုသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Madeleine သည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနှင့်စာမေးပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင်ဒေသအလိုက်နေထိုင်သောကိန်းဘရစ်ချ်သူငယ်ချင်းများကိုမတွေ့နိုင်ခဲ့ပါ။ သို့သော်သူမ၏မိဘများကသူမကို cava နှင့် whipped cream နှင့်အတူပက်ဖြန်းခြင်း၏ဂုဏ်ရည်ကိုခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူမကဤသို့ရှင်းပြသည် - ငါရေဖျော်ပြီးအလုပ်ပြန်ဆင်းပြီးနောက်လူတိုင်းကအလွန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမခံစားခဲ့ရ - ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုမတွေ့ရခြင်းသည်ခက်ခဲသည် လူအများစုသည်အနီးအနားတွင်မနေထိုင်ကြသောကြောင့်ကန့်သတ်ချက်များလျှော့။ မရမှီမလည်ပတ်နိုင်ပါ။
ကင်းဘရစ်အပို Varsity နှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်အတွက်ရမှတ်များ (credit: Madeleine Southey)
Caitlin သည်ကျောင်းပြီးခါနီးတွင်ဘွဲ့အတွက်အဆုံးသတ်အခမ်းအနားများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသူမထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ သူမသည် Ede နှင့် Ravenscroft ထံမှကျောင်းဆင်းရန်အတွက်ငှားရမ်းပြီးသူမ၏မိသားစုဝင်များကိုဥယျာဉ်၌ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကိတ်မုန့်နှင့် scones များကိုငှားခဲ့သည်။ သူမပြောသည့်အတိုင်းအားနည်းချက်တစ်ခုမှာသူမပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။
အမွေးနှင့်အမည်းရောင်တောက်ပသောအဝတ်အစားသည်အပူလှိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအဝတ်အစားများမည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ (credit: Juliet Roche)
ဒီ 'ပုံမှန်စံအသစ်' ကိုကြည့်ရင်၊ အကယ်၍ ကျောင်းဆင်းပွဲသည်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပျက်လျှင်၊
တက္ကသိုလ်သည်ကျောင်းသားများအားကျောင်းသူ / သားများကိုကျောင်းထွက် (ချက်ချင်းသော်လည်း၊ အခမ်းအနားမယူပဲ) ဘွဲ့ယူရန် (သို့) အခမ်းအနားမပါ ၀ င်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့်ဘွဲ့ရခြင်းသည်ယခုနှစ်ရွေးချယ်ခံရသူများအတွက်မသေချာမရေရာမှုရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်တယ် တက္ကသိုလ်နှင့်ကောလိပ်များသည်အစပိုင်းတွင်ကွဲလွဲသောအကြံဥာဏ်များပေးခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကျောင်းသားများအတွက်ပိုမိုခက်ခဲစေခဲ့သည်။ ကျောင်းပြီးသောအခါဖင်နန်က“ ကောလိပ်နဲ့တက္ကသိုလ်ကနေဆန့်ကျင်ကွဲလွဲတဲ့အကြံဥာဏ်တွေရခဲ့တယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျို့ဝှက်စွာဘွဲ့ရရန်ရွေးချယ်ပါကကတိထားရာအခမ်းအနားကိုနောင်လာမည့်နေ့တွင်ပယ်ဖျက်မည်သို့မဟုတ်လျှော့ချသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ရှိလူအများအပြားကစိုးရိမ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်တက်ရောက်သူများအနေဖြင့်အခမ်းအနားအပြည့်အစုံရှိခြင်းကြောင့် လာမည့်နှစ်တွင်တက္ကသိုလ်၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအပေါ်တစ် ဦး တင်းမာစေ။
ထိုအချိန်မှ စ၍ တက္ကသိုလ်မှရှင်းလင်းချက်အချို့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကဘွဲ့ရတိုင်းသည်အခမ်းအနားပုံစံအချို့ကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတက်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအာမခံထားသည်။ သို့သော်ဤအမှုအရာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်သည့်အခါလေ၌တက်နေဆဲဖြစ်သည်။
Finnian သည်ကျောင်းဆင်းပွဲကိုနှောင့်နှေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော် Caitlin ကိုကျောင်းပျက်ကွက်မှဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ အစတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘွဲ့ရခြင်းကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျနော်တို့မရှိခြင်းအတွက်ဘွဲ့ရအကြံပြုခဲ့သည်။
သူမသည်သူမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်။ ခံစားချက်များကိုရောထွေးတော်မူပြီ: ငါငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဘွဲ့ရဖို့မရကိုအများအားဖြင့်စိတ်ပျက်မိပါတယ်, ကငါတို့အတူတူထိုသို့ပြုမှဒီဂရီတစ်ခုသင့်လျော်သောအဆုံးဖြစ်ရပြီလိုသမျှသောငါတို့အဘို့ဤမျှလောက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါပဲ။
ဒါပေမယ့်သိသာတဲ့, ဘယ်တော့မှဘွဲ့ရဘယ်တော့မှတော်မူပြီးမှ, ငါပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးတာကိုမသိရပါဘူး။ ငါကြင်နာ၏တကယ့်ပျင်းစရာကျောင်းဆုသို့မဟုတ်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်တူသောစိတ်ကူးစိတ်ကူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအခမ်းအနားကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင်ရရှိပြီး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး M.A. ဘွဲ့နှင်းသဘင်အတွက်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးအခြားအရာအားလုံးပျက်ကွက်ပါကပိုမိုဆိုးရွားသွားနိုင်သည်။
Madeleine ကဒီနွေရာသီမှာသူမဘွဲ့ယူချင်တယ်လို့လည်းခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါကကင်းဘရစ်ဘွဲ့ရသူလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ နောင်လာမည့်နေ့တွင်အခမ်းအနားတစ်ခုရရှိလိမ့်မည်ဟုသူမစိတ်ချခဲ့သော်လည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေအနည်းငယ်စိတ်ပျက်မိသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကငါ့ထံသို့ဝမ်းနည်းခံစားရပါဘူး။ ငါကိန်းဘရစ်ခ်ျကိုဘာကြောင့်လျှောက်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကနာမည် (သို့) ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်မဟုတ်ဘဲဓလေ့ထုံးစံနဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ဘွဲ့ရတာနဲ့အဆုံးသတ်တာထက်ဘွဲ့ယူတာကငါ့အတွက်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်။
ရော်ဘင်သည်ယခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဘွဲ့ရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ထူးထူးဆန်းဆန်းပိတ်ဆို့မှုများကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်လုပ်သင့်သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ထောက်ပြသည်: ဤ '' ပုံမှန်အသစ် '' ဖြစ်သောကြောင့် အကယ်၍ ကျောင်းဆင်းပွဲသည်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပျက်နေလျှင်၎င်းသည်အလွန်လွန်ကဲသောခံစားမှုဟုခံစားရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါအနည်းငယ်ပင်ကျွန်တော်ပင်စက္ကူကောင်းတဲ့စက္ကူအပိုင်းအစရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပါးပျဉ်း, စီတန်းခြင်းနှင့်နေရောင်ခြည်, ဒါပေမယ့်နေဆဲငါ့အကောလိပ်ကျွန်တော်တို့ကိုချပါစေမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ငါတို့ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခံစားရ!
အချို့သောနောက်ဆုံးရွေးချယ်သူများအတွက်မူ၎င်းတို့သည်ကင်းဘရစ်တွင်နေထိုင်ပြီးလေ့လာမည့်နောက်ဆုံးအချိန်မဟုတ်ပါ။ ဖင်လန်နိုင်ငံသည်ခေတ်သစ်ဗြိတိသျှသမိုင်းကိုလေ့လာရန်အတွက် MPhil တစ်ခုကိုသူ့ဘွဲ့ကြိုကောလိပ် (Emmanuel) တွင်ရရှိခဲ့ပြီး Caitlin သည်ကင်းဘရစ်တွင်သင်ကြားရေးသင်တန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဆုံးရှုံးသွားသောအသုံးအနှုန်းကသူမကိုစတင်ရန် ပို၍ စိတ်အားထက်သန်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မူလက PGCE ကိုကျွန်ုပ်၏မွေးရပ်မြေမြို့တွင်လုပ်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့မှသာငှားရမ်းငွေကိုစုဆောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုငါကိန်းဘရစ်၌အချိန်ပိုရသည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိသည်။
သူမသည်သို့သော်ဝန်ခံပါဘူး, သိသာထင်ရှားတဲ့ကအားလုံးနီးပါးငါ့မိတ်ဆွေများကိုဘွဲ့ရကြလိမ့်မည်, သူတို့ကယ့်ကိုငါ့အဘို့ကိန်းဘရစ်ထိုကဲ့သို့သောချစ်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလုပ်မယ့်အရာကဲ့သို့တူညီသောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူတို့သူတို့သူတို့ဘယ်တော့မှမကျန်ခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဤမျှလောက်သွားရောက်ကြည့်ရှုလိမ့်မည်ဟုကတိရှိသည်ဟုငါကစစ်မှန်တဲ့လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းတက်ပြီးသူများအတွက်ပင်၊ ကင်းဘရစ်သည်သူတို့၏ဘ ၀ ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေ ဦး မည်။ ရော်ဘင်သည်အောက်တိုဘာလတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းဆိုင်ရာဘွဲ့လွန်အစီအစဉ်ကိုစတင်မည်ဖြစ်သော်လည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်နေရန်ခွင့်ပြုသကဲ့သို့ငါကိန်းဘရစ်သို့ပြန်လာမည်မှာသေချာသည်။
ကိန်းဘရစ်တွင်နောက်ဆုံးသက်တမ်းဆုံးရှုံးခြင်း၊ လူကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးအဆင့်နိဂုံးချုပ်ခြင်းနှင့်ဘွဲ့ရခြင်းတို့ကြောင့်အကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်ခဲ့ရသော်လည်းဤကျောင်းသူ / သားများသည်တက္ကသိုလ်တက်စဉ်ကာလကိုနှစ်သက်စွာပြန်ကြည့်ကြသည်။ ကိန်းဘရစ်၌ကျန်နေသေးသောသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထပ်မံတက်ရောက်မည့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအနာဂတ်အခမ်းအနားများ၏ကတိတော်သည်ထိုကျောင်းသားများသည်ကင်းဘရစ်၏နောက်ကျောကိုအစဉ်အမြဲမြင်တွေ့ရခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကင်းဘရစ်အားနောက်ဆုံးစကားလုံးများကိုမေးသောအခါမက်ဒလင်းကနောက်ပြောင်သည်။ ဤအချက်ကိုကောင်းစွာပေါင်းစပ်ထားသောကောင်းသည့်ကိုးကားချက်များစွာရှိသော်လည်းကံကောင်းတာကကဗျာဆရာကကျွန်ုပ်ကို (ငါမျှော်လင့်ပါတယ်) ငါ့ကိုဟန်ဆောင်။ မထားခဲ့သဖြင့်မကြာမီသင်တို့ကိုတွေ့မြင်မည်ဟုပြောလိုက်သည်။
အသွင်အပြင်ပုံရိပ်ခရက်ဒစ်များ - မက်ဒလင်းဆွတ်တီ၊ Caitlin Cashmore-Roche, Finnian Robinson, Robyn Topper
•သင့်အိမ်၌ရှိနှင့်ပြီးသောအရာများကို သုံး၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘွဲ့ယူခြင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း